UChiesa ushise amathemba eSpain okuwina i-Euro
UDonnarumma uweze i-Italy wayifaka kowamanqamu kwi-Euro
July 6, 2021 July 6, 2021 Impempe.com
UGigi Donnarumma ulungise iphutha alenze engenelwa yigoli ngokuvimba iphenathi esizwe i-Italy idlule ngehubo kwiSpain iye kowamanqamu kwi-Euro 2020. I-Italy seyilinde ozonqoba phakathi kwe-Emngland neDenmark ukubona ukuthi izodlala nobani kowamanqamu.
Nokho kube nguFederico Chiesa obe yiqhawe le-Azzuri kulo mdlalo owandulela owamanqamu ebithwele kanzima kuwo eWembley Arena e-England ngoLwesibili ebusuku. Indlela ebidlala ngayo iSpain beyenza kubukeke kuyiyo ezodlulela kowamanqamu.
ISpain iyona esheshe yangena egiyeni kulo mdlalo wezimbangi ezindala zaseNinginzimu ye-Europe. UMikel Oyarzabal bekumele ayibeke phambili iSpain ngomzuzu ka-13. Uthole elihle ibhola elimkhiphe wabhekana ngqo nonozinti we-Italy.
Kodwa wehlulekile ukulibamba ibhola, lazishayisa kuye qede labuyela emuva, yaphunyuka kanjalo ke i-Italy. Iqhubekile iSpain nokulawula kulo mdlalo futhi anamthuba ibiwakhanda kodwa yehluleke wukuwasebenzisa ngendlela.
UDani Olmo, obeyiphela endlebeni ezitobheni ze-Italy, ubethi uyaqeda ngonozinti wamaNtaliyane uGigi Donnarumma ngomzuzu ka-25, kodwa ibhola lakhe laphuma phezu kwepali.
Ngokuhamba komdlalo, i-Italy iqalile ukungena kulo mdlao. Nokho beyiphoqeleka ukudlala amabhola amade asuka emuva athunyelwe phambili. Bekuyisebenzela lokhu njengoba uLorenzo Insigne ubewafica lamabhola qede adalele izitobha zeSpain usizi.
Ngasekupheleni kwesiwombe sokuqala, u-Emmerson Palmieri ucishe wayibeka phambili i-Italy. Bekukade kuwumnyakazo oqale ngebhola elide elifike ku-Insigne walibeka kamnandi phambi kuka-Emmerson obe esezama ukudedela udalimede kodwa lazishayisa epalini selimdlile u-Unai Simon epalini leLa Roja.
Esiwombeni sesibili iSpain iqhubekile nokuwubamba kahle umdlalo, kuyiyo ephethe ibhola izama izindlela zokugqobhoza udonga lwe-Italy.
Kodwa kujike izinto, zayibhimbela ngomzuzwana nje ngomzuzu ka-60. Unozinti we-Italy uvimbe ibhola kade ihlasela iSpain, walibeka phambi kukaVerrati obe eselilula silithumela ku-Insigne.
Yena ube eselibeka phambi kuka-Immobile kodwa u-Aymeric Laporte walivimba. Kodwa ngebhadi lakhe livele layohlala phambi kukaFederico Chiesa obe eselivalela enethini kwaba ngu 1-0.
Leli goli liwuvulile lo mdlalo njengoba bese kumele iSpain sihlasele kakhulu kunakuqala ukuthola igoli lokulinganisa. UKoke bekumele alishaye elokulinganisa ngomzuzu ka-65, kodwa wavele wadlala ngethuba engqofa ibhola eceleni kwepali eyedwa.
FUNDA NALA: IBafana icacamezele kwayilungela kowokuvula kwiCosafa Cup
Kuthe sekusele imizuzu eyishumi futhi i-Azzuri seyiwubona umuzi okhanyayo, waqhamuka u-Alvaro Morata wathi uyawumisa umcimbi wokujabulela ukungena kowamanqamu. Uphaselwe elihle ibhola ngu-Olmo, emkhipha uqekelele ebhekana nonozinti.
Akabange esalenza iphutha, waliphushela ekhoeni wasala elicinga la lingekho khona uDonnarumma, kwaba ngu 1-1. ISpain sisale sikhala sincishwa iphenathi ngomzuzu wokugcina kulandela ukuthi ibhola lishayise esandleni kukaputeni we-Italy uGiorgio Chielini.
Umdlalo uphele zibambene kwayiwa esikhathini esengeziwe. Nakhona ayikho evume ukugoba uphondo kuleiz zinkunzi. Bese zidlala ngokucophelela, zisaba ukuvuleka emuva bese kungena amanzi endlini.
Kuze kwalamula amaphenathi okuyila i-Italy ifike yaqedela khona umsebenzi. Iwine ngo 4-2, yaliwasha kanjalo ke ijezi iSpain.
Previous Previous post: ICovid seyiphoqe ukumiswa kweHollywoodbets Super League
Next Next post: UZinnbauer kusenguye umqeqeshi wePirates ‘okwamanje’, kusho isikhulu